Nidaamka wax soo saarka: Zirconium wuxuu nuugaa hydrogen at 400-800 ℃ wuxuuna soo saaraa zirconium hydride iyada oo loo marayo taxane ah marxaladaha kala-guurka. Hydride Zirconium waxaa lagu jajabiyaa heerkulka sare. Guud ahaan, Haydarojiin waxaa lagu fuuqbixin karaa 500 ℃ iyadoo la raacayo faaruqinta 0.133 Pa, hydrogen-na waxaa gebi ahaanba laga saari karaa 800-1000 ℃.
Nidaamka wax soo saarka: Zirconium wuxuu nuugaa hydrogen at 400-800 ℃ wuxuuna soo saaraa zirconium hydride iyada oo loo marayo taxane ah marxaladaha kala-guurka. Hydride Zirconium waxaa lagu jajabiyaa heerkulka sare. Guud ahaan, haydarojiin waxaa lagu qallajin karaa 500 ℃ iyadoo la hoos marinayo faaruqinta 0.133 Pa, hydrogen-na waxaa gebi ahaanba laga saari karaa 800-1000 ℃. Zirconium hydride waxaa lagu sifeeyaa kubad shiideysa kubad tamar sare leh oo fuuqbaxay si ay u sameyso budada sare ee loo yaqaan 'zirconium ultrafine zirconium' oo ka hooseysa faaruqinta iyo heerkulka sare.
Xaaladda keydinta iyo gaadiidka: xirmooyinka biyaha ee budada zirconium (budada zirconium ee badanaa loo isticmaalo qarxinta, waa olol iyo qarxin, inta lagu guda jiro gaadiidka iyo keydinta ayaa guud ahaan ku jirta shaabadda biyaha) hababka qalajinta budada zirconium: 1 hoostiisa qallajinta ilaalinta argon ee qalajinta faakiyuumka qalajinta foornada, 2 labadaba mashiinka mashiinka mashiinka ku shubaya xaalada faakiyuuga, heerkulku wuxuu kufiican yahay qiyaastii 55 darajo, iwm.
Budada Zirconium, budada zirconium budada
Tilmaamaha Magaca Shiinaha ： Budada Zirconium, budada zirconium budada
Magaca Ingiriisiga ： Budada Zirconium powder Budada birta Zirconium
Caanaha 'molecular formula' Zr miisaanka kelli 91．22
Xeerka Alaabada Khatarta ah ： 42005
hantida kiimikada muuqaalka ： Bir dhalaalaysa oo dhalaalaysa ama budo cawl cawl leh. Markii la gubo, waxay soo saartaa iftiin cad si ay u sameyso zirconia.
arjiga ugu weyn ： Waxaa loo adeegsaday warshadaha nukliyeerka iyo daawaha uumiga u adkaysta, iftiinka iftiinka, rashka, iwm., Sidoo kale waxaa loo isticmaalay dawada qalabka kiimikada, sunta kiimikada, iwm.
Barta dhalaalida ： 1852 dhibic karkaraya ： 4377
Cufnaanta qaraabada (biyo = 1) ： 6．49 Cufnaanta qaraabada (hawo = 1): kuleylka dhalaalaya ： 251.2J / g
milmi ： Kalama milmi karo biyaha, ku milmi kara aashitada kulul, hydrofluoric acid, aqua regia iyo ur urto sulfuric acid.
heerkulka istaagga (℃) ： tamarta dabka ugu yar ： 5mJ cadaadis daran (MPa) ：
Khatarta qaraxyada gubashada
gubasho ： guban kara Kala soocista khataraha dabka ee xeerarka dhismaha ： labaad
dhibic (ing) dhibic (℃) ： heerkulka autoignition (℃) ： Heer kicin (℃): xog lagama hayo
xadka qarxa ee hooseeya (V%) ： 0．16 (g / l) xadka sare ee qarxa (V%) ： xog maleh
sifooyinka halista ah ： Budada ayaa sababi doonta qarax guban markii la kululeeyo, loo garto ololka furan ama u nugul oksaydh
Wax gubaya (burburka) wax soo saarka ： zirconia xasilloonida ： xasilinta
Wax taboo Aashito adag, ogsijiin, leedh. Danbiyada Polymeric ee ka dhanka ah ： ma muuqan karo
habka loo bakhtiiyo ： Biyo, budo qalalan, ciid.
Kaydinta iyo gaadiidka · Qaybta halista ： Fasalka 4.2 Maqaallada is gubidda lama filaanka ah sumadda xirmooyinka alaabada halista ah ： sagaal
qaybaha xirxirida ： Ⅱ
Taxaddarrada keydinta iyo gaadiidka ： Si aad u noqotid dhinaca nabdoonaanta, badanaa waa la qoyay oo la mariyey iyada oo aan ka yarayn 25% biyo inta lagu jiro keydinta iyo gaadiidka. Ku kaydi qol qabow oo hawo leh. Ka fogow dabka iyo kuleylka. Weelka ha la xidho. Ka fogow oksaydhyada, asiidhyada iyo saldhigyada. Soo dejinta khafiifka ah inta aad gacanta ku heyso si aad xirmadaada u ilaaliso isla markaana aad uga hortagto daadashada.
Khatar sun ah xadka soo-gaadhista ： Shiinaha MAC: 5mg / m3 Midowgii Soofiyeeti ee hore MAC: Heer caadi ah TLV-TWA: ACGIH 5mg [Zr] / m3 USATLV-STEL ： ACGIH 10mg [Zr] ／ m3
dariiqa duulaanka ： Neefsashada cunnada
khatar caafimaad ： Sumeynta Zirconium laguma soo sheegin warshadaha.
gargaarka degdegga ah soo-gaadhista maqaarka ： Ka qaad dharka wasakhaysan kuna maydh saabuun iyo biyo socda.
indhaha la xiriir ： Isla markiiba furi baalasha indhaha sare iyo hoose kana biyo raaci biyo socda ama cusbada caadiga ah. Dhakhtar u tag.
Neefsasho ： Ka tag goobta si aad u hesho hawo nadiif ah. Dhakhtar u tag.
cunitaanka ： Cab biyo diiran oo kugu filan, kiciya matag, raadi talo caafimaad.
ilaalinta nidaamka xakamaynta injineernimada ： Guud ahaan uma baahnid difaac gaar ah, laakiin waxay u baahan tahay in laga hortago khataraha qiiqa.
Ilaalinta neefsiga pi Marka isku-darka boodhka hawadu ka sarreeyo heerka, waxaa lagugula talinayaa inaad xirato qalabka is-nuugista miiraha.
ilaalinta indhaha ： Marka isku-darka boodhka hawadu ka sarreeyo heerka caadiga ah, xidho muraayadaha badbaadada kiimikada.
suunka ilaalinta ： Xidho dharka guud ee wax lagu ilaaliyo.
Gacan ilaalinta ： Xidho galoofisyada kiimikada-difaaca ah
· Jawaab daadinta Dabka ka jar. Xidho maaskaro iyo gacmo gashi Ururi oo dib-u-warshadayn.
Hore: Biradium, Birta V
Xiga: Xafnium Powder, Hf